१३ सालमा पिता भएका किशोर फेरी भाइरल! मिल्यो कहिले पनि भुल्न नसक्ने यस्तो धोका! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»१३ सालमा पिता भएका किशोर फेरी भाइरल! मिल्यो कहिले पनि भुल्न नसक्ने यस्तो धोका!
१३ सालमा पिता भएका किशोर फेरी भाइरल! मिल्यो कहिले पनि भुल्न नसक्ने यस्तो धोका!
By पूजा बानियाँ on २३ बैशाख २०७५, आईतवार ११:२५ रोचक खबर
२००९ सालमा एक १३ सालका युवक पिता भएको समाचारले सनसनी मचाएको थियो। त्यस समाचार विश्वमानै भाइरल हुन पुग्यो भने कोहिले विश्वास गरे भने कोहिले विश्वास गरेनन्। विश्वास नगरे पनि त्यस समाचार साँचो भएको संचार मध्यमहरुले पुष्टि गरे। त्यस समाचार भाइरल भएसँगै ‘द सन’ले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तयार परेको थियो भने उनि १३ सालको किशोर पिता भएको कुरा समेत पुष्टि गर्न सफल भएको थियो। लगभग त्यस घटना भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ भने फेरी त्यस किशोरको कहानी अहिले आएर फेरी भाइरल बन्न पुगेको हो।
१२ वर्षको उमेर एक १५ वर्षकी किशोरीसँग प्रेम बसेसँगै उनि १३ सालको हुँदा पिता बनेका थिए। ति किशोरको नाम एल्फी रहेको थियो। प्रेममा परेसँगै पिता बनेको समचारले सनसनी मचाएको समयमा यस समाचारलाई किएर अनेक थरिको अड्कल बाजी भएको थियो। संचार माध्यममा पनि राम्रै ठाउँ पाएको यस तथ्यलाई पुष्टि गर्न ‘द सन’ले रिपोर्टनै तयार पार्यो।
पिता बनेको करिब ९ वर्ष पछी उनि फेरी भाइरल भएका छन्। त्यस समय खिचिएको तस्विर जसमा उनि आफ्नो छोरिसँग बसेको तस्विर भाइरल भएको थियो। त्यस तस्विरमा उनि आफ्नो चोरीकोलाई आफ्नो हातमा राखेको देख्न सकिन्छ। पिता बनेको ९ वर्ष पछि उनको आफ्नो प्रेमिकासँग बिछोड भएको छ। उनलाई आफ्नो प्रेमिकाले धोका दिएर अरुसँगै सम्बन्धमा रहेको कुराले दुखि बनाएको हो। उनलाई ति प्रेमिकाले धोका दिएकी छिन्। अहिले विवाह समेत अर्कै व्यक्तिसँग गरेपछि उनि मुर्छित परेको कुरा भाइरल भैरेको छ।